Nzira yekugadzira sei ecommerce? | ECommerce nhau
Nzira yekugadzira sei ecommerce?
Ehezve, kugadzira ecommerce harisi basa rakareruka, asi harisi iro basa ratinofanira kutya nekuoma kwayo kwakanyanya kubva zvino zvichienda mberi. Kusvika pakuti kutanga kambani yepamhepo yehunhu uye netarisiro yekuve nehunyanzvi kubudirira kunoda, pamusoro pezvose, yakanaka timu kugadzira chirongwa ichi uine vimbiso huru yekuti ichi chinangwa chinodiwa chazadziswa.
Asi icho chinongedzo chakabatana nemari chingaunze isu matambudziko makuru kwazvo mukusimudzira kwayo kwakakodzera. Kunyanya, nekuda kwekushaikwa kwechikwereti panguva chaiyo yekuitangisa, ndipo panomuka matambudziko makuru. Tichifunga kudiwa kwekutenga michina yemakomputa, zvigadzirwa zvetekinoroji uye kuhaya vashandi vanokodzera kuti vaite mabasa avo akakosha.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti kuti utarisane nedambudziko rezviyero izvi, ndiko kuti, kuvhura ecommerce chikuva, chinhu chekutanga chauchazoda ndechekugadzira rakasimba uye rinechokwadi chirongwa chebasa. Sezvo iwe uchitoziva mune chero nyanzvi chirongwa, zvichave zvakafanira kutanga kuvaka chitoro chepamhepo kana kutengesa Kubva pakutanga. Pasina kumhanyisa uye nekutarisa kune zvekutanga zvinodiwa uye ndizvo zvauchazofanira kubhadhara kuburikidza nebhangi mutsara wechikwereti.
1 Gadzira ecommerce: teerera kune zviri pamutemo zvinhu
2 Ipa zita rako kambani yedhijitari
3 Kugadzira bhizimusi repamhepo: zvipo zvepamutemo
4 Yambiro nemitsetse yechikwereti
5 Makadii aya?
6 Mitero yemitero
Gadzira ecommerce: teerera kune zviri pamutemo zvinhu
Hapana mubvunzo kuti hwaro hwepamutemo mubhizinesi rako huchave hwakakosha pakutanga. Kuitira kuti iwe usave nechero rimwe dambudziko kubva panguva chaiyo iyoyo. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuziva iyo mirau yazvino pachinhu ichi. Saka kuti usazove nemamwe matambudziko, hauzove nesarudzo kunze kwekuzivisa nezvekutongwa kwemutemo panguva ino. Semuenzaniso, iyo yatino tarisa pazasi:
Mutemo 7/1998, waApril 13, pamamiriro ekubvumirana kwakawanda.
Royal Mutemo Wemutemo 1/2007, waNovember 16, uchibvumidza iwo akagadziridzwa chinyorwa cheGeneral Mutemo weDziviriro yeVatengi neVashandisi.
Mutemo 3/2014, waKurume 27, uyo unoshandura chinyorwa chakavandudzwa chemutemo wakazara wekudzivirira kwevatengi nevashandisi.
Muzviitiko zvese, zvinoshanda sechinhu chekudzidza kutanga kana kugadzira chitoro chepamhepo kana commerce. Kubva kwavachakupa iwo madhairekitori ekuti uve muzvinabhizimusi mune ino chikamu chinogadzira.
Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuyeuka kuti hazvina musoro kugadzira ecommerce uye kwete kutevedzera zvazvino mirau. Nekuti chinhu chega chinogona kukonzeresa iwe kubva panguva iyoyo zvichienda mberi kune akawanda matambudziko kupfuura iwe zvaunofunga pakutanga. Kunyangwe kukuendesa iwe kuti ugare munzira uye rako bhizinesi chirongwa. Ehe iwe unofanirwa kuziva kuti izvo zviri pamutemo zvinhu zvechitoro chepamhepo kana zvemagetsi zvekutengeserana zvinotongwa nemitemo yakati wandei. Zvese kuzviisa mukuita uye ku manejimendi ayo.
Ipa zita rako kambani yedhijitari
Pakutanga, usakahadzika kuti kana uchisarudza zita kune yedu nyowani ecommerce tiri kuzowana maviri akanyatsosiyaniswa kesi. Kune rimwe divi, tsvaga zita rinogona kukanganisa vashandisi kana vatengi, uye kune rimwe racho, iro rakabatana nezviitiko zvebhizimusi rako kubva kune chero nzira mukutungamira kwayo.
Ndichiri kune rimwe divi, zvakakoshawo kuti iwe utarise kubva panguva ino chimiro yakabatana nechishandiso chako. Nekuti mukuita, tichaona kuti mazita mazhinji atove kushandiswa uye nekudaro, isu tinofanirwa kuve vane hunyanzvi hwekugadzira. Kupfuura zvaunogona kufunga pakutanga. Nekuti pakupera kwezuva hazvisi zvekuvapa chero zita nekuti rinogona kuve nemhedzisiro isingadiwe nezvido zvako mubhizimusi repamhepo.
Kubva pane ino yakasarudzika maonero, usakahadzika kuti kusarudza zita rechitoro chedu chepamhepo chichava chakati omei basa. Kusvika padanho rekuti zvinogona kutora nguva yakawanda kupfuura iwe zvaunofunga izvozvi. Zvirinani kumirira kwenguva yakareba uye kuzviita mushe pane kupa chero zita kumutsara webhizinesi rako kuburikidza neInternet. Ichi chinhu chaunofanira kufungisisa kuitira kuti zvese zvikure zvakakwana kubva panguva ino zvichienda mberi. Kusvika padanho rekuti patinotaura nezve chinhu ichi isu tinowanzo tarisa kumakambani ekushambadza ayo anonyanya kushanda.
Imwe misiyano ndeye iyo parizvino inopa chokwadi chekuenda kuchikuva kwetekinoroji kuti iwe ugone kuvandudza zviitiko zvako mukati mekambani yepamhepo. Kubva pane ino maonero, pane zvakawanda zvingasarudzwa zviripo mumusika wekugadzira ecommerce, zvisinei, chinhu chekutanga chatinofanira kufunga nezvacho saizi yechitoro chedu chepamhepo.
Kugadzira bhizimusi repamhepo: zvipo zvepamutemo
Madrid rave iro guta rekutanga muSpain uko zvichakwanisika kugadzira kambani kuburikidza neInternet, mushure mekunge kanzuru yeguta yanamatira kuchirongwa. "Kuendesa paInternet", chirongwa cheHurumende yeIndasitiri icho chichaendeswa kune mamwe maguta eSpain. Nekuitwa kweichi chishandiso, nzira dzese dzinodiwa dzinogona kuunzwa pamwechete kushandura zano rezvemabhizimusi kuita rimwe, pachinzvimbo chekufamba kubva pahwindo kuenda pahwindo.
Kubudikidza nenzira iyi nyowani unogona kurongedza maitiro aya pamusoro mutsetse kubva kumba uye nekukurumidza. Nguva yemazuva makumi maviri nemasere - iyo nguva yainoda kugadzira kambani kuSpain kana ichipfuura nemahofisi ehoro yedhorobha, nharaunda yakazvimiririra, marejista, notariari kana masimba emitero, pakati pevamwe, yakadzikiswa zvakanyanya kuburikidza nenzira iyi nekuti Anoita ese mapepa online, kunze kweye notary.
Yambiro nemitsetse yechikwereti
Pamberi pekugona kuita kondirakiti chimwe chezvikwereti izvi, zvinodikanwa kuti nyatsoongorora chibvumirano kuti uone ndeapi makomisheni ainosanganisa uye nemarii yavanotemerwa, sezvo vachigona kuwedzera zvakanyanya mutengo wekupedzisira wekushandisa mari iyi. Kune yakatovhurwa yechinyakare, mamwewo atypical ayo anowanzo kuwedzerwa ayo anobva kune chero kufamba kana kudzokorodza kubva pakubvumirana kwechigadzirwa ichi. Ndivo chaizvo zvinotevera:
Izvo izvo zvinonyanya kuiswa muzvibvumirano zvavo ndezvekuvhura, izvo zvinomiririra pakati pe2% uye 3% yehuwandu hunodiwa.
Zvimwe zvisiri zvakajairika zvinogona kuoneka mumhando iyi yechigadzirwa uye izvo zvinoenderana nekuwedzeredzwa uye kudzikiswa kwechikwereti uye, izvo zvakare zvinosanganisa pakati pe2% ne3%.
Kana zvikaitika kubhadhara kwakakwana kana kusarudzika kwekutanga, anokwereta anozosungirwa kubhadhara mupi wechikwereti muripo wekutanga wekubhadharisa muhuwandu hweinenge 1,00% yeiyo mari yechikwereti chakabhadharwa pamberi.
Imwe chirango inogona kuverengerwa ndeyekuti inotorwa kubva mumatambudziko umo zvikamu zvechibvumirano zvinofanirwa kuve zvakasiyana, kana kungofanirwa kuchinjwa.
Iyi kiredhiti yezvikwereti izvo mamwe emabhangi masangano anotengesa anotendera avo vanogamuchira mari yepakati nepakati-refu yekudyara kwavo bhizinesi, pamwe nekwaniso yekubvuma yakatemwa kana kusiyaniswa yemari yemubhadharo sechirevo chekukwezva kutarisisa kwevanogona kunyoresa, kuwana kune mutsara wechikwereti unogona inosvika zviuru makumi mashanu emadhora, uye iyo inofungisisa avhareji amortization nguva iri pakati pemakore mashanu negumi nemashanu.
Iyi mitsara yechikwereti inogona kushandiswa zvakakwana kune zvakawanda zviitiko zvekambani kana zvehunyanzvi zviitiko zveavo vanonyorera, kubva pakutora zvivakwa, kubhadhara michina, fanicha, midziyo yemakomputa, nezvimwe, kuburikidza nezvinodiwa zvakanyanya zvebhizinesi rega rega.
Zvakare vanozvishandira uye nyanzvi vanogona kuve nedzimwe nzira dzekubhadhara zvinoenderana nezvavanoda, senge, semuenzaniso, kuzadzisa mabasa avo emari, ayo mamwe marongero emari akagadzirwa asi aine mashoma ekushandisa mukupa kwavo kwazvino.
Kunyangwe mazhinji ezvigadzirwa zvemari izvi zvakagadzirirwa kupa hunyanzvi hwekushandira mashandiro akanaka emabhizimusi avo kana zviitiko zvehunyanzvi, zvimwe zvinodiwa zvinodiwa nemapoka aya hazvikanganwike kana. Chokwadi, iyo freelancers uye nyanzvi Vanogona kunge vaine nzira dzekubhadhara mari kuti vazadzise mabasa avo emari, ayo mamwe mabudiro emari akagadzirwa. Iyi ndiyo mamiriro e "Mutero Wokubhadhara Mutero" uyo mamwe masangano echikwereti akaunza mumwedzi ichangopfuura, mune ino kesi iri kiredhiti kiredhiti yekubhadhara kwemitero yako. Zvirongwa zvaro zvikuru zvakavakirwa pachinhu chekuti hachitakure kufarira uye kuti chinogona kudzoserwa mukati menguva inofungidzirwa yemwedzi mitatu.
Iyo zvakare ine yepamwedzi kana yekukura amortization uye kubatanidzwa kweiyo yekuvhura komisheni iyo iri pamusoro kupfuura mune mamwe emari modhi modhi, kunyanya 3%, inova ndiyo chaiyo kudonhedza kukuru uko ichi chigadzirwa chemari chinosanganisa panguva yekuchibvumirana. inowanzo kuwedzerwa imwezve atypical iyo inowana kubva kune chero kufamba kana kudzokorodza kubva pakubvumirana kwechigadzirwa ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Nzira yekugadzira sei ecommerce?
Nzira yekukamura sei mubhadharo muHaimari yeecommerce yangu?